Maxamuud Xaashi Iyo Hoggaamiye Xirsi Oo Fagaare Isku Waydaarsaday Weedho Adag Oo Ku Qotoma Xilliyadii Ay Wasiirrada Madaxtooyada Ahaayeen – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo wasiirkii Madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi haddana ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee KULMIYE ayaa isku muruxsaday fagaare lagaga doodayay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya. Labadan siyaasi oo isaga dambeeyay kursiga wasiirka madaxtooyada xukuumaddii Siilaanyo ayay hangoolladu iska sudhmeen markii Maxamuud Xaashi Cabdi sheegay in wada hadalladii socday 2012 ilaa 2015 ahaayeen kuwo madhalays ah waxaana arrintaasi ka jawaabay Xirsi oo ku dooday in kulamadii dhacay intii uu wasiirka madaxtooyada ahaa ahaayeen kuwo midho dhal ah laakiin, markii dambe xukuumaddu sii wadistooda la ambatay.
Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa mar kale u holladay ka jawaabidda dhalliisha Hoggaamiye Xirsi u jeediyay Kulmiye “Waxaan aamminsanahay xaqiiqaduna ay tahay KULMIYE markii horena ma jaahwareersanayn maantana ma jaahwareersana. Kulmiye maba’diida guud ee wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya iyo dariiqa loo marayo waa ka midaysan nahay madaxweynaha, xukuumaddiisa aniga iyo Prof Samatar. Aragtiyaha hoose wixii aan mabadiida ahayn waa aragtiyo shakhsi ah, Kulmiye dee sida bani’aadamka ayuu u kala aragti duwan yahay shakhsi shakhsi taas iyada waan calaamadinaya. Saaxiibkay Xirsiwaxaan leeyahay shalay haddii aanu Kulmiye jaahwareersanayn ma markii aad ka baxday ayuu jaahwareer kuula muuqday oo sawirka kula yeeshay? Taasina aragti sax ah maaha,” ayuu yidhi Maxamuud Xaashi